မောင်ထင်သည် နောက်ဆုံး၌ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်မြင်ချက်ပေး၏။ | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
Ma E Kin, modern novelist (1891-1975) »
မောင်ထင်သည် နောက်ဆုံး၌ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်မြင်ချက်ပေး၏။	12Jan11
“မြန်မာအစိုးရဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကို ပိုကျယ်ဝန်းအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။ အိုင်ထဲကဖားဘဝက မလွတ်မြောက်သေးသမျှ တိုင်းပြည်အခြေအနေဟာ ရှုပ်ထွေးပီး ကောင်းလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချိန်ကြာမလားတော့မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်အနေနဲ့ တနေ့မှာ မြန်မာပြည်ဟာ နိုးကြားလာမယ်၊ ကမ္ဘာမှာ မျက်စိပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မခံနိုင်လို့ နိုင်ငံခြားထွက်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေဟာ အခုရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်အသီးသီးကို လေ့လာကြည့်ရှု၊ မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်နေတာတွေကို ကောင်းကောင်းမှတ်သား သင်ကြားလာစေချင်တယ်။ နောက်ပီးတော့ တချိန်ချိန်မှာ အမြန်ပြန်လာပီး မိခင်နိုင်ငံကြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ အားစိုက်ဆောင်ရွက်ကြစေချင်တယ်။”
နဲမိုတို ယူရိခေါ-စစ်မြေပြင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုးတိုးပြောသံများ
ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးသက်ထွန်း ပြန်- စာရေးဆရာအို၏ အတိတ်အတွေး ၊ အတွေးအမြင် ၂၀၀၉ ဒီ
Filed under: education, note, politics	|3Comments	3 Responses to “မောင်ထင်သည် နောက်ဆုံး၌ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်မြင်ချက်ပေး၏။”	Feed for this Entry
Nyan Lin Tun on January 13, 2011 said:
စလုံးခံပွီးသား မွနျမာတယောကျက သူ့သားတှကေို ဆုံးမတယျ။ မငျးတို့က အနာဂတျရဲ့ Singaporean လေးတှတေဲ့။ ဒါတှသောရှေးလူကွီးတှကွေားရငျ ဘယျလိုနမေလဲမသိ။
ကိုကို on January 13, 2011 said:
Aung Khin on October 22, 2011 said:
There are many people who want to do things nicely they should be encouraged rather that disturbing them. There should bearight leader withagood attitude. I don’t expect any better out come with the wrong leader who reluctantly started showing something reluctantly, without actually working, after hardest push of it’s own people, international actions.
Reply	« ယူသန့်တို့ခေတ်